By ဝေယံအောင် 15 August 2017
၁။ Wisdom for Life ပရဟိတအဖွဲ့၏ပရိဟိတလှုပ်ရှားမှုကို ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံတွင် ၂၀.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြု လုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပရဟိတပွဲတွင် ကလေးငယ်များကို ပုံပြောပြခြင်း၊ ပုံပြင်စာအုပ်များ လက်ဆောင်ပေး အပ် ခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်းများကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်လိုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၆၃၆၇၅၆၁၆ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။
၂။ ဂျပန်လူမျိုး အသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာ Mr. Hiroshi IGUCHI ရိုက်ကူးသော နာဂလူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ရုပ်ရှင် မှတ်တမ်းကို ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းရှိ ပုလဲကွန်ဒို၊ အခန်းအမှတ် 322B၊ ဒုတိယထပ်တွင် ၁၈.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၌ ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းတွင် နာဂလူမျိုးတွေရဲ့ ရှေးအစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့ အရှည် ၁၀ မီတာကျော်သည့် အုန်း မောင်း ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အခမဲ့ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန် ) ဂီတ ဌာနမှ ဌာနမှူးဆရာ ဓီရာမိုရ်၏ အနောက်တိုင်းဂီတနှင့် မြန်မာ့ဂီတ၏ကွာခြားပုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသော လူမျိုးစုအလိုက် ကွဲပြားသည့် အသံအရင်းအမြစ်များအကြောင်းကိုလည်း ဟောပြောသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၃။ မြန်မာဝိုင်ချစ်သူများ၏ Myanmar Wine Lovers Club 6th Gathering- Wine&Food Pairing ပွဲတော်ကို မရမ်း ကုန်း မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း (၇ မိုင်) ရှိ Cafe del SeOUL restaurant တွင် ၁၆.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် ပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်မှတ်ဈေးနှုန်းအား ၁ သောင်းကျပ် သတ်မှတ်ထားပြီး နာမည်ကျော်ဝိုင် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးကို မြည်းစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၄။ အာဟာရမြှင့်တင်ရေးဟောပြောပွဲနှင့် ပျော်စရာအစီအစဉ်များပါဝင်မည့် ဘဝရှေ့ဆောင်ရက် ၁၀၀၀၊ အနာဂတ်အတွက် အလင်းရောင်းပွဲတော်ကို ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ရှိ၊ Yangon Gallery တွင် ၁၉.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပွဲတော်တွင် အာဟာရဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ရုပ်သေးပွဲ၊ မြန်မာ နိုင်ငံတဝန်း ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းပြပွဲများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
၅။ EDULINK နှင့် Canterbury Education Group (CEG) ပူးပေါင်း၍ Australia သို့ ပညာသွား ရောက်သင်ကြားလို သူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်လမ်း၊ Junction Square ၃ လွှာရှိ EDULINK ရုံးခန်းတွင် ၁၇.၈.၂၀၁၇ ရက် နေ့ညနေ ၅ နာရီခွဲတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လိုသူများသည် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၅၇၆၅၀၉၀ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
၆။ ၁၉၉၀ ကျော်ကာလ ဂီတများကို ပြန်လည်ခံစားနိုင်မည့် MasterBaytar : Retro Session ဂီတညကို ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဗားဂရာလမ်း အမှတ် ၂၇၁-၂၇၃ (Penthouse) ရှိ Mediterranean Restaurant တွင် ၁၉.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့ည ၈ နာရီ တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၇။ မြန်မာ၊ အမေရိကန်နှင့် ဗီယက်နမ်အနုပညာရှင်များ၏ DJ အပါအဝင် Hip Hop ဂီတဖျော်ဖြေမှုကို လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းရှိ The Basement Barတွင် ၁၉.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့ည ၆ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ကြေး ၈ ထောင်ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီး ကွဲပြားခြာနားသည့်ဂီတများကို နားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၈။ အစားအသောက်ချစ်သူများအတွက် Doemal Food Land ပွဲတော်ကို Junction Square တွင် ၁၈.၈.၂၀၁၇ မှ ၁၉. ၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုတော်ပွဲတော်တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ နာမည်ကျော်စားသောက်ဆိုင်များမှ ပါဝင်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်များ၊ အစားအသောက်ပြိုင်ပွဲများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၉။ ပန်းချီဆရာ ၁၆ ဦးပါဝင်သော အင်းစိန်မြို့နယ်ပန်းချီပြပွဲကို ဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှိ ပန်းချီပန်းပုဌာနချုပ် (ဗဟို) ပန်းချီပြခန်း တွင် ၁၆.၈.၂၀၁၇ မှ ၂၀.၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် လက်ရာစုံပန်းချီကား ၄၀ ကျော်ပြသ သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၁၀။ ပန်းချီမြင့်စံမြင့်၏ to the Sea ပန်းချီပြပွဲကို ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ရှိ Eternal Art Gallery တွင် ၁.၈.၂၀၁၇ မှ ၂၈. ၈.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်းကျင်အခြေပြု အရိုင်းလစ်ပန်းချီကား ၂၅ ကား ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။